Ananambo - Ho tsarovantsika
Publié le 7 avril 2010 par hotsarovantsika.over-blog.com
Ny Ananambo (Moringa Oleifera) izay afaka manadio rano dia hazo avy any Inde tamin’ny voalohany fa avy eo niparitaka nanerana ireo tany mafana ka anisan’izany Madagascar.Manana anarana maro samy hafa ny ananambo amin’ny teny malagasy : Ananambo, Anamorongo, anambo, felikambo, felika mironga, felinimirongo,…… mirongo.Nihanitombo ny fandinihana io hazo io ary nisy ireo niteny azy ho zavamaniry mahagaga. Izany dia tsy noho izy afaka manadio rano fotsiny ihany fa indrindra koa noho ny otrikaina betsaka entiny.Ampiasaina amin’ny fitsaboana nentim-paharazana ihany koa izy, ary afaka ampiasana hanaovana zezi-maitso.
Raha ampitahaina amin’ireo vokatra efa fantatra ny ANANAMBO dia hita fa :
Im-7 n’ny VITAMINE C ao amin’ny VOASARY ny ao amin’ny ananambo
In-4 n’ny VITAMINA A ao amin’ny KARAOTY ny ao amin’ny ananambo
In-4 n’ny SOKAY (CALCIUM) ao amin’ny RONONO ny ao amin’ny ananambo
In-3 n’ny VY ao amin’ny EPINARA ny ao amin’ny ananambo
In-3 n’ ny POTASIOMA ao amin’ny akondro ny ao amin’ny ananambo
Mitovy ny HERY FANORENANA (Protéine) ao amin’ny ananambo sy ny ao amin’ny RONONO
Ankoatr’izay dia mbola misy vitamineB, vitamine D
Ho an’ny zaza 1-3taona, ny fihinanana ravina ananambo lena 100g dia mitondra ny 50% n’ny filana amin’ny kalsioma, vy ary hery fanorenana ary 1/3 n’ny potasioma sy ny asidra mineraly tsy voavoatran’ny vatana (acides amines essentiels).
Ny fihinana ravina 20g dia mitondra ny 100% n’ny filana vitamina A sy vitamina C ho an’ny zaza.
FOMBA FITAHIRIZANA NY ANANAMBO
Sasana madio ny ananambo , mbola tsy miala amin’ny taho madinika, hakifika hiala tsara ny rano, dia atapy amin’ny toerana madio, ambony tsihy ohatra, atao amin’ny aloka misy fifamalian-drivotra. Avadika matetika mba tsy hisy bobongolo. Rehefa maina tsara dia sarahina amin’ny taho madinika ny ravina. Totoina ho lasa vovoka. Tehirizina anaty boaty madio sy misarona.
Eo ho eo amin’ny 20-40 % ny vitamina A eo fotsiny no voahazona raha toa ka hamainina amin’ny masoandro ny ravina, saingy 50-70 % kosa raha toa ka hamainina amin’ny maloka.”
FOMBA FAHANDRO NY ANANAMBO
Ananambo sy legioma miaro mangahazo
Mangahazo - Karaoty - Laisoa - Voatabia - Vinaigitra, sira, menaka - Ananambo
Andrahoina mitokana ny managahazo, atao teti-pohy.
sasana ny legioma dia tetehina. Afangaro ny saosy vinaingitra sy ny legioma ary ny ananambo manta, avy eo dia akambana amin’ny mangahazo. Asiana haingo voatabia.
Ananambo sy totom-boanjo
Ravin'ananambo voatoto - voanjo voatoto - saosy voatabia
Atao ny saosy voatabia, rehefa masaka dia arotsaka ny voanjo voatoto.
Farany dia arotsaka ny ravina ananambo na ny vovoka.